ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက “ကင်းမရွာဖြစ်စဉ်နှင့… – PVTV Myanmar
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက “ကင်းမရွာဖြစ်စဉ်နှင့…
·7months ago ·18 Comments
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက “ကင်းမရွာဖြစ်စဉ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကြေညာချက်အမှတ် (၇/၂၀၂၁) ကို ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်း
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက အပတ်စဉ်ထုတ်ပြန်နေကျဖြစ်သည့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၅/၂၀၂၁) ကို ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ သတင်း
ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့မှာကျရောက်မယ့် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ (၇၆) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အကြိုကို နော်ဝေးနိုင်ငံရှိအောင်ဆန်းစုကြည် ပန်းခြံကော်မတီ က ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် Online မှတဆင့်. ကြီးမှူးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်း တို့ကို နားဆင်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Like – 8K Share – 938
Radio NUG – 16th Jan, 2022 Evening
2021-06-17 at 7:25 PM
မအလ ပြောတဲ့ Online အစိုးရသာဖြစ်နေမယ်
စစ်ကောင်စီကို အချိန်အများမပေးသင့်ပါဘူး အာဏာရှင် အမြစ်ပျက်ချေမှုန်းရေးကို အမြန်ဆုံး အမြန်ဆုံး အမြန်ဆုံး အမြန်ဆုံး လုပ်ပေးပါ
အခုက မြို့ကြီး တွေမှာ ပုံမှန်အတိုင်း သွားလာနေကြပြီ အသားကျနေကျပြီ ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေလဲ အတန်အသင့်လည်ပတ်နေပြီ၊ ဒုက္ခ သည်တွေလည် နေ့စဉ် ၂နဲ့မြှောက်နေသလို တိုးပွားနေပြီ
ရွာလုံးကျွတ်မီးရှို့ဖြစ်စဥ်တွေကို ဘယ်လောက် ထိုင်ကြည့်နေရမှာလဲ ၄လ ကျော်နေပြီ ဘယ်လောက် အကြောင်း မဲ့ အသေခိုင်းဦးမှာလည်း တိုက်ရင်းနဲ့ပဲ သေပါရစေ ။
2021-06-17 at 8:25 PM
2021-06-17 at 8:27 PM
Aung San Phyo New says:
2021-06-17 at 9:10 PM
Zoom နဲ့ Join လို့ရပါပြီ
တကမ္ဘာလုံး အနေနဲ့ အမေအတွက် ဆုတောင်းပေးကြရအောင်
Ashin Htavara says:
2021-06-17 at 9:46 PM
Event အသေးစိတ် ကို ဒီမှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်
2021-06-17 at 9:55 PM
ရာဇ ဟူသည် မင်း(အစိုးရ၊အုပ်ချုပ်သူများကဏ္ဍ)
ရာဇ + တောဝါ = မင်း(အစိုးရအုပ်ချုပ်သူများ) + (အခြခံဥပဒေဆိုးဘေး ပရိရာယ်ဆိုးဘေး ဗျူဟာဆိုးများဘေး ) ထိုဘေးဆိုးကျင့်သုံးခြင်းကြောင့် ပြည်သူပြည်သားများဘေးသင့်စေ၏ တိုင်းပြည်အပေါ် မင်းဆိုးမင်းညစ်ဘေး ကြရောက်ကါတိုင်းပြည်ဆင်းရဲစေသည်။ အများပြည်သူ မီးလိုပူ အိုးလိုဆူ၍ ရာဇာပျက်ပြောင်းပြည်တိမ်းစောင်းတတ်။ ထို့ကြောင့် ပေါင်းဖို့နေနေသာသာ ဝေးကွာအောင်မလာမကပ်ရအောင် ဘုရားရှင်က ဟောခဲ့တာ
ပြည်ပပြည်တွင်းမင်းတွေလည်းမမှန် ဆင့်ကဲဆင့်ကဲအားလုံးကလည်းမမှန် နတ်တွေကစိတ်ဆိုး ရာသီဥတုမိုးလေတွေကလည်းမမှန်ဖြစ်ကုန်၏။
နာယကဂုဏ် ၆ ပါး မင်းကျင့်တရား ၁၀ ပါး သင်္ဂဟတရား ၄ ပါးကျင့်သုံးသူရာဇာပဓါနံ မင်းကောင်းမင်းမြတ်မည်၏။ ပြည်တွင်းပြည်ပထိုမင်းများသည် ပြည်သူကိုဘေးမဖြစ် တိုင်းပြည်မဆင်းရဲ ချမ်းသာ၏ အခြေခံဥပဒေကောင်း ပရိရာယ်ကောင်း ဗျူဟာကောင်းများဖြင့်အုပ်ချုပ်ကြ၏ ။ပိန္နဲသီး၊သလဲသီများလိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြင်သည့်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာ ၁၃၅ပြည်သူအားလုံးဟာမင်းအစိုးရတွေပါပဲ မင်းကောင်းမင်းမြတ်များဖြစ်ကြပါစေ။
2021-06-17 at 10:38 PM
Daw Aye Aye San says:
2021-06-17 at 11:10 PM
Save myanmar. ကူညီကြပါ
2021-06-17 at 11:39 PM
2021-06-18 at 1:26 AM
2021-06-18 at 3:35 AM
2021-06-18 at 6:46 AM
မင်း ဘဝ အတွက် အမုန်းလူသား says:
2021-06-18 at 6:23 PM
K Zin Win says:
2021-06-18 at 6:58 PM
Mee Nage says:
2021-06-18 at 8:39 PM
2021-06-19 at 4:33 PM
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက ဇွတ်အတင်းခြိမ်းခြောက်ကောက်ခံနေတဲ့ မီတာခတွေကို ပြည်သူတွေဆောင…